Haweenayda Ugu Gaaban Dunida Oo Matali Doonta Filimka Musal Salka Khaakhda Ah Ee (American Horror Stories) | Hawraar
August 18, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Haweenayda Ugu Gaaban Dunida Oo Matali Doonta Filimka Musal Salka Khaakhda Ah Ee (American Horror Stories)
Haweenayda buuga dhacdooyinka ugu layaabka badan ee dunida ku gashay rikoodhka qofka ugu gaabandunida, Ayuti Omoghai ayaa la sheegay, inay ka qayb gali doonto matalaada filimka Khaakhda ama argagaxa ah ee musal salka ah kaas oo lagu magacaabo, (American Horror Stories).
Ayuti Omoghai oo da’deedu labaatan jir tahay, waxa hore dunidu ugu baratay markii ay jabisay rikoodhka gaabnaanta aadamiga ee dunida, sidaana ay ku gashay buuga dhacdooyinka dunida ee Guinness Book of World Record, ka dib markii dherarkeedu hal dhudhun iyo wax yar noqday taas oo qiyaas ahaan u dhigmaysa sadex iyo lixdan santi mitir.
Laakiin sida la sheegay waxa bisha soo socota ee October ay ka qayb qaadan doonta matalaada filimka argagaxa badan ee aynu kor ku xusnay magaciisa, kaas oo loo rejaynayo inay qayb libaax ka qaadan doonto, waxaana si wayn uga hadlay warkeeda wakaaladaha wararka dunida intooda badan.
Ayuti ayaa hore u matashay filim dokomantari ah oo lagu magacaabo (Body Shock: Two Foot High Teen), kaas oo ka sheekaynayay xaaladeeda nololeed, waxaana filimkaas soo saaray, Indian Big Brother shirkada lagu magacaabo ee dalka Hindiya laga leeyahay sanadkii 2009-kii.
In kasta oo ay tahay qof aad u gaaban oo marka aad eegto aad moodayso inay wali carruur tahay, haddana waxa ay Ayuti ku qanacsan tahay inay ka soo dhalaali doonto kaalinteeda, ay ka qaadanayso filimkaas.
Sidoo kale gabadhan loo aqoonsaday inay tahay qofka dunida ugu gaaban waxa ay aad ugu faraxsan tahay inay u gudubto, matalaada filimada ee dalka Maraykanka, taas oo ay guul balaadhan oo nolosha ay ka gaadhay ula muuqata, waxa kale oo farax galinaya aktarada ay la matalayso gaar ahaan, (Jessica Ling iyo Neil Patrick Harris), oo ka mid ah dadka la matalaya filimkaas musal salka ah ee qaybtiisi afraad dhawaan la soo saarayo.